बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पस्यो, सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुर्यायो , के कति सिलिण्डर वगायो ? कति भयो नोक्सान ? – Classic Khabar
बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पस्यो, सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुर्यायो , के कति सिलिण्डर वगायो ? कति भयो नोक्सान ?
July 1, 2021 264
खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर १ वेल्सीमा रहेको बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पसेर क्षति पु-याएको छ । कयर खोलाले उद्योगमा क्षति पु-याएको हो । उद्योगका निर्देशक बिमल कालाखेतीका अनुसार त्यहाँका धरै सिलिण्डर वगाएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुगेका छन् ।”वाढीले उद्योगको संरचनामा नोक्सान पु-याएको छ । उद्योगमा १० देखि १५ हजार सिलिण्डर रहन्छ ।
के कति सिलिण्डर वगायो र अरु नोक्सान कति भयो भन्ने बारेमा एकिन भइसकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले निरन्तरको वर्षाले पूर्वी चितवनको खैरहनीसँगै रत्ननगर, राप्ती र कालिका नगरपालिका प्रभावित भएको बताउनुभयो । स्थानीय खोलाहरु बढेर पुलहरु उच्च जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उद्धारका लागि खटिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार पूर्वी चितवनका खगेरी, कयर र लदरी खोलाले खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर १,२,३,८ र ९ सँगै रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ शान्ति चोक डुवानमा परेको छ । कतिपयलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगिएको उहाँले बताउनुभयो । लदरी खोलाको चैनपुर चोकबाट भित्र रहेको नयाँ पुल बाढीले वगाएको छ । लोथर र राप्ती खोलासमेत वढ्दै गएको भन्दै उहाँले सौराहा पनि डुवानको खतरामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
Prevसुजाताको आफ्नै छोराले आमाको ह ‘त्या बारे दिए ड रला ग्दो बयान : ……त्यसपछि आमालाई काठको गोलिया बनाउने मसिनमा लागे
Nextरुपा सुनारलाई आफ्नो घरमा कोठ नदिएकी घरबेटी हिरासत मुक्त भएपछी रुपालाई दिइन उजुरी,वकिलले खुलाए रहस्य अब के होला ? (भिडियो सहित)
ट्रयापमा पारेर २२ बर्षिय भुपेन्द्रको …….
बिरामीको सेवा गर्दागर्दै नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा कार्यरत ७३ स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी कोरोना सङ्क्रमित, आफु संक्रमित भएपनि बिरामीको सेवा गर्न छोडेनन्